Foto anụ ọhịa maka ndị malitere - LucidPix
Ọtụtụ n’ime anyị na-achọ ihe anyị ga-eme ka anyị na-alụso nje a ọgụ, nke a emeekwala ka ọtụtụ ndị nweta ịma mma nke okike. Enwere ọtụtụ mmadụ na-esonyere ụwa n'okporo ụzọ dị ukwuu, na-achọ ụzọ isi gbanahụ ntaramahụhụ nke ụlọ n'abaghị na ndị ọzọ nso. Ihe ga - esote bụ otu esi akachasị ese foto nke anụ ọhịa maka ndị mbido.
Igwefoto na Photography
Otu nnukwu ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ ozugbo bụ ihe ntọala igwefoto m kwesịrị ịnwe iji jide anụmanụ ọ kachasị. Ihe a niile dabere na igwefoto gị.
Ekwentị mkpanaaka, gụnyere ọtụtụ nsụgharị iPhones na gam akporo, na-ebugharị ya na igwefoto nwere oke ike, yana obere mmachi. Iji maa atụ, obere ogo ihe mmetụta ha pụtara na enweghị ọkụ gbakọrọ na mmetụ ọ bụla maka ịgbasa bọtịnụ ọ bụla. Nke a abụghị nsogbu na ọkụ na-enwu enwu na n'èzí, mana ọ bụrụ na ị na-achọ ịgba egbe n'ime ụlọ gbara ọchịchịrị ma ọ bụ n'abalị, igwefoto ndị a na-agbasi mgba ike, na-akpata nsị, foto na-acha ọkụ.
N'otu aka ahụ, agbụrụ iji mepụta ekwentị nke kachasị dị oke ọnụ pụtara na enweghị ohere maka usoro mbugharị mgbagwoju anya. Ndị na-emepụta ihe edoziwo nke a gụnyere ọtụtụ lenses, ụfọdụ nwere nnukwu akụkụ na ndị ọzọ nwere mbugharị, mana atụmatụ ndị a ka na-adazịkwa ezigbo oghere mbugharị na Igwefoto DSLR. Maka nke a, gbalịsie ike ịbugharị gabiga ókè, ka ị na-enwe ihe egwu nke belata nkọwa zuru oke na ịkọwa foto gị.
Ọzọkwa ọ dị mkpa ijide n'aka na gị kpoo ihuenyo ahụ ịhọrọ isi ihe dị na foto gị. N'ụzọ a, ị nwere ike ijide n’aka na anụmanụ ahụ na-elekwasị anya nke ọma, ọ bụghịkwa ihe dị n’azụ. Gbalịa ilekwasị anya n'anya anụmanụ maka foto dị mma.
N'ụfọdụ oge ịnwere ike iji flash gị tinye ụfọdụ ọkụ na ebe a. Naanị buru n'uche nke ahụ ọkụ gị agaghị adị mma ọ gafere ole na ole site na igwefoto. Ọ bụ na nke ahụ esighi ike. Kwesịrị iche banyere ebe ọ na-agaghị akpagbu anụmanụ ahụ, ebe ọ bụ na iji flash na-eme ka ihe ọ bụla ghara imebi anụmanụ ahụ.
Enwekwara a nnukwu nhọrọ nke nzacha nke ahụ nwere ike iweta ụda dị iche na onyinyo gị. Can nwere ike ịgbanwe foto gị ka ọ bụrụ oji na ọcha iji mee ka àgwà dị nro karịa banyere ihe onyonyo ahụ, ma ọ bụ jiri ya na-eme ka ụfọdụ obi ụtọ na ịdị mma nke ọdịdị okike.
Igwefoto na nlele nke Anụmanụ Ezigbo Mma
Ihe ozo di nkpa banyere ihe omuma nke umu anumanu bu n’uche ijide oge site na uzo ziri ezi. Mgbe ụfọdụ, mgbe anyị na-ese foto, anyị na-echefu ebe anyị nọ na etu ihe ahụ siri dị na foto ikpeazụ. Ọ dị mkpa ijide isiokwu ahụ na ọnọdụ eke, na-ewetara ya nso maka eziokwu maka onye na-ekiri ya.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na anụmanụ ejirila oge ndụ ya niile dị n'okpuru ala n'okpuru osisi, gbaa mbọ hụ na ị gosipụtara nke ahụ. Ọ bụrụ na ụdị dị nke na-adapụ site na osisi ruo na osisi, ọ gaghị abụ ihe dị mma igosi ha na omume ịwụ elu ma ọ bụ na nsọtụ alaka, na - eburu ya maka mmali ọzọ na - esote?
Ọ dịkwa mkpa ijide isi anụmanụ ahụ na foto a. Ọ kwesịghị ịbụ isi isiokwu, mana tinyere isi na foto gị na-enyere aka ime ka anụmanụ dị ọcha, na-eme ka foto ahụ bụrụ nke na-adọrọ mmasị onye na-ekiri ya. Ptomi anya anụmanụ ahụ ga - enyere gị aka ịnabata uche ndị na - ege ntị.
Biputere foto ụmụ anụmanụ
Ọbụna ndị na-ese foto kachasị mma na-etinye ha foto Ọ na-adịkarị anyị ka ezukọta ọnọdụ zuru oke chọrọ iji mee ọmarịcha foto. Site na ngwa ihe eji emeghari onyonyo nke oge a, anyị nwere ike ịme obere mgbanwe na-agbanwe oke.
Lucid bụ otu n'ime ndị ndu kachasị ọhụrụ na teknụzụ ọgụgụ isi mmadụ atọ na-eji teknụzụ arụ ọrụ. Ngwa Lucid, LucidPix, na-enye ndị okike ụzọ dị mfe iji mepụta foto 3D na kekọrịta ha na nyiwe mgbasa ozi ọ bụla. Adịghị akwụ ụgwọ dị na nyiwe iOS abụọ na gam akporo, usoro ịgba mbọ nke LucidPix tụgharịrị foto oge niile. ngagharị 3D na-agagharị. I nwekwara ike itughari onyonyo 3D ka nke gi vidiyo ma ọ bụ GIF na-eji ngwa LucidPix, na-enye ndụ gị ọhụụ karịa ihe ịtụnanya gị, dị ka a ga-asị na ị laghachiri n'otu ebe ahụ na-ele ka anụmanụ ahụ na-agafe n'ọhịa.
Ugbu a ị dịla njikere ịbanye n’ọhịa ma sonyere ọtụtụ ndị na-anabataghị ịga obere oge. Havenwere ngwa na ihe omuma iji mee njem gi na ihe omuma gi, karie ihe nlere karie oge mbu site na ikike ohuru nke omuma nke ohia.
10 Omumaatu nke amamihe di na ndu nke ubochi anyi →← Etu aga-eme GIF animimenti na 3 usoro dị mfe